GMAZ Yonakurira Hurumende Nyoka Mhenyu paNyaya yeHupfu
Tafadzwa Musarara Grain Millers Association
Sangano rinomirira vanogaya hupfu, reGrain Millers Association of Zimbabwe (GMAZ), rinoti dambudziko rekushaikwa kwehupfu hwakachipa riri konzerwa nekuti Grain Marketing Board iri kutadza kuendesa chibage chakakwana kumakambani anogaya hupfu.
Sangano iri rinotiwo dambudziko iri rinogona kupera kana makambani ari pasi peGMAZ akabvumidzwa kugaya chibage chavari kutenga vegakubva kunze kwenyika nemari iri pamusoro peyakatarwa nehurumende.
Vachitaura mushure memusangano waitwa nesangano reNational Business Council of Zimbabwe, sachigaro weGMAZ,VaTafadzwa Musarara, vati dzimwe nhengo dzesangano ravo dzakatotanga kutenga chibage kubva kunze kwenyika dzichishandisa mari dzadzo.
Izvi zvinotevera mvumo yakapihwa vanhu nemakambani ane mari dzawo kutenga chibage negorozi kubva kunze kwenyika muna Zvita gore rapfuura.
Asi vati nhengo dzesangano ravo hadzikwanisi kugaya nekutengesa hupfu dzichitengesa nemutengo wakatarwa nehurumende sezvo hurumende yakavimbisa kuti yaizovapa chibage chekuti vagaye hupfu hweRoller Meal vachitengesa nemutengo uri pasi.
Muna Zvita hurumende yakaderedza mutengo wehupfu hunodyiwa nevazhinji, hweRoller Meal, kubva pazana remadhora kana kudarika kusvika pamadhora makumi mashanu pamakirogiramu gumi.
Hurumende yakavimbisa zvekare kuti yaizopa vanogaya chibage, chibage chakachipa kuti vanhu vakwanise kuwana hupfu uhwu izvo zvinonzi neveGMAZ hazvisi kuitika.
VaMusarara vati huwandu hwehupfu hunodiwa pamwedzi hwawedzera nekuda kwekuti mutengo wezvimwe zvinhu zvinodyiwa neveruzhinji zvakaita sechingwa nemupunga, wakwira izvo zvave kukonzera kuti vanhu vadye sadza mangwanani, masikati nemanheru.
Vati nyika inoda zviuru zana nemakumi mashanu ematani pamwedzi zvehupfu hunosanganisira Roller Meal nehumwe.
Pahupfu uhwu, GMAZ inogaya matani zviuru makumi masere humwe huchibva kuhurumende nemasangano anopa rubatsiro.
Sangano reGMAZ riri pamakakatanwa nekomiti yeparamende inoona nezvekurima pamusoro pemashandisiro arakaita mari yarinonzi yakapihwa nebhanga guru renyika inoita mamiriyoni makumi maviri nemanomwe emadhora ekuAmerica kuti ritenge gorosi.
Komiti inotungamirwa naVaJustice Mayor Wadyejena inoti sangano reGMAZ rinofanirwa kutsanangura kuti rakafambisa seyi mari yarakapihwa gore rapera.
Zvichakadai, mumwe mukuru musangano reNational Business Council of Zimbabwe, VaKeith Guza, vati hurumende inofanira kutara mutengo unoita kuti vaye vakatenga chibage chavo kunze kwenyika, vatengese nemutengo unoita kuti varambe vari mumabhizimisi.
VaGuza vatiwo sangano ravo richaongorora mafambiro ehupfu kubva kuzvigayo kusvika pahunotengeswa senzira yekudzivirira huwori.
Zvichakadai hurumende yaziviswa kuti mutengo hwehupfu weRoller Meal, hwakirwa kubva pamadhora makumi mashanu kusvika pamadhora makumi manomwe pamakirogiramu gumi kutanga nhasi chaiko.
Muchiziviso chaburitswa nebazi rezvemari, hurumende yati iri kutora matanho ekuona kuti hupfu hwakachipa uhwu hunosvika kune vanokodzera.
Asi chiziviso ichi hachina kutaura kuti hurumende ichawedzera huwandu hwechibage chinoendeswa neGMB nekunhengo dzeGMAZ , iyo yati kushaikwa kechibage chakachipa kubva kuhurumende ndiko kuri kukonzeera kushaikwa kwehupfu.
Mutauriri weGMAZ, VaGarikai Chaunza, vanoti vaona chiziviso cherurmende ichi uye vachaita nhauriranao nehurumende kuona kuti nyaya iyi yofambiswa sei.
Hupfu, zvikuru sei, hweRoller Meal, hwakatanga kunetsa kubvira nguva yakatarwa mutengo nehurumende uye hupfu uhwu hwave kuwanikwa pamukoto.
Zimbabwe Anti-Corruption Commission yave kuongorora mamwe makambani anogaya hupfu neGMB pamusoro penyaya iyi.